Malunga nathi - u-Hebei Tailian Fastener uMenzi weeMveliso Co., Ltd.
I-Hebei Tailian Fastener yokuThengisa iMveliso Co., Ltd.ibekwe kwiSithili saseYongnian, kwisiXeko saseHandan, elona ziko likhulu lase China lokuhambisa imveliso. Inkampani ineseti epheleleyo yokuqhubekeka kunye netekhnoloji yokuvelisa yeebhanti ze-anchor, iindlela zovavanyo olupheleleyo kunye netekhnoloji yokuvelisa ephezulu, kwaye isebenzise inkonzo yemozulu yonke. Yasekwa ngonyaka ka-2000, inkampani igubungela indawo engaphezulu kwama-200 mu kwaye inenkunzi ebhalisiweyo eyi-120 yezigidi ze-yuan.
Inkampani ngoku inabaphathi abangaphezulu kwama-300, amagcisa kunye nabasebenzi kwinkampani yemveliso, yahlulwe yangamasebe amane aphambili: isebe lokuthengisa, iziko lolawulo lwezinto, isebe lobuchwephesha bemveliso, isebe lezolawulo kunye nesebe labasebenzi kunye nesebe lezemali. Icandelo lokuthengisa liqukethe ukwahlula amandla, icandelo lezothutho, icandelo le-photovoltaic kunye namanye amasebe. Kukho iofisi yaseTibet, iofisi yeGuxi kunye neofisi yaseGuangdong. Inkampani iwusebenzise ngokupheleleyo umxholo wolawulo lwenzululwazi kunye nobuchwepheshe kunye nophuhliso oluzinzileyo, ngokusekwe kumgaqo-nkqubo wophuhliso wokunyaniseka kunye nomgangatho kuqala. Igcine isabelo semarike ephezulu kakhulu kwimveliso yesizwe yeJiaoan kwaye ithathe inxaxheba ekunikezelweni kweeprojekthi zesantya esingaphezulu kwama-200 kuzwelonke ezinje ngeBeijing, Hong Kong, Macao, Guangdong, Beijing, Kunming, Qingdao, Beijing, Shanghai kunye neGuangdong. Oko yasekwayo, inkampani ihlala igcina ireyithi yokupasa engaphezulu kwe-90% kwimveliso esemgangathweni ekwiSampula yeZiko loVavanyo loNxibelelwano kunye neZiko loVavanyo loMgangatho weNgoma.
Injongo yethu "kukuphila ngomgangatho, ukuphuhlisa igama, ukuzuza ngenkonzo, nokubeka abasebenzisi phambili", kunye nokuququzelela imveliso ngokungqinelana nemigangatho yesizwe kunye neemfuno zomsebenzisi. Ndilima ngezixhobo eziphambili nezigqibeleleyo, umgangatho wemveliso ogqwesileyo, iimveliso zithengisa kakuhle kwilizwe liphela, ziphumelele ukuthembela kunye nokudumisa abasebenzisi, ukhetho lweTailian Fastener Co, Ltd. ! I-Tylenol Fasteners iya kukubonelela ngenkonzo enyanisekileyo kuyo yonke inkqubo.
Umzi mveliso wethu usebenza ngokuvelisa: i-anchor bolt, i-stud bolt, i-U-bolt, i-U-hoop, i-brace brace, i-steel bolt, i-cylindrical welding nail, i-hot-dip barts bolt, i-iron tower bolt, i-screw screw, i-bolt ipleyiti, i-bolt yezemigodi, uthotho lwamantongomane, iinxalenye ezizodwa, njl. Inkampani yethu ineminyaka emininzi yophuhliso kuphando lokuvala kunye nophuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo, kwaye iqokelele amava atyebileyo kwimveliso ye-anchor bolt, isenza iqela leenjineli kunye amagcisa asebenza kuyilo lwe-anchor bolt kunye nokuvelisa kunye namagcisa angaphambili anamava. Ngokunzulu koqoqosho lwentengiso kunye nenkqubela eqhubekayo yetekhnoloji yokulungisa, ukuveliswa kwetekhnoloji yefekthri kunye nokuhlaziywa kwezixhobo kuyatshintsha suku ngalunye oludlulayo, kwaye isikali sayo semveliso siyanda ngokuthe chu. Iyile ishishini lokulungisa intsimbi elikhulu kakhulu elidibanisa ukukhula, ukuvelisa, ukuvelisa, ukugcinwa kunye nokulungiswa kweebholts zesiseko, izincedisi zeshishini kunye nezemigodi kunye neemveliso zothotho lwezixhobo, kunye nemveliso yoyilo yonyaka yeetoni ezingama-50000 kunye nexabiso lonyaka lokuphuma malunga Izigidi ezingama-500 zeerandi. Inkampani ineeworkshops ezinkulu zemveliso yanamhlanje kunye nezixhobo zokuxhasa imveliso kunye neseti epheleleyo yezixhobo zovavanyo. Yamkela izinto ezisemgangathweni ezikrwada ezisemagini zentsimbi kumashishini amakhulu emveliso kunye nakwimimandla yesizwe, kwaye iqinisekisa umgangatho wezinto ngelixa ulawula ngokungqongqo umgangatho. Inkampani ipasile ukuqinisekiswa kwenkqubo esemgangathweni ye-ISO9001.